မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြသနာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« BEST ONE of the 16 Ways to Fix Burma
Mobocracy in Myanmar clashing with INSTALLING process of Democracy »
မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြသနာ
The following article is the views of the writer only. Not necessarily I agree with all his facts and opinion.
Source Haji U Mg Mg (SKW) မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြသနာ
အမှန်တရားသိရှိဖို့ အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက် လွန်ခဲ့သောနှစ်ကရေးသားခဲ့ပြီး လ ဝ က မဂ္ဂဇင်းတွင်အသုံးပြုရန် ပေးပို့ခဲ့သော်လည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် တစ်ပါတီအာဏာရှင် အုပ်စိုးမှုကာလ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု တင်းကြပ်သော စစ်ကောင်စီ အုပ်ချုပ်မှုကာလများ လွန်မြောက်ပြီး ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိ လာခဲ့သည်မှာ အများ အသိပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ကျင့်သုံးလာသောအခါ အခြေခံဥပဒေမှ ပြဌာန်း ပေးပြီး ဖြစ်သည့်အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခွင့်တို့ကို မည်သူ့ထံမှ တောင်းခံနေရန် မလိုတော့ဘဲ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီး အချိန်နှင့်အမျှ ရင့်သန်တိုးတက်လာသလောက် အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးများ တစ်စထက်တစ်စ ပိုမိုရရှိလာမည်မှာ မလွဲဧကန်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
ကှ၊်စာတမ်းတွင် “နိုင်ငံကြီးသားတိုင်း စောင့်ထိမ်းအပ်သော တာဝန်ဝတ္တရားများ” ကိုအဓိကထား တင်ပြလိုပါသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ပြသနာသည် လွပ်လပ်သော နိုင်ငံတိုင်းတွင်ရှိတတ်သော ပြသနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။အထူးသဖြင့် လွပ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အစရှိသည့်အခြေအနေများ အပြောင်းအလဲဖြစ် ပွားသည့်အချိန်၊ မိမိနိုင်ငံ၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အခြေအနေများ ပြောင်းလဲမှုရှိ သည့် အချိန်အခါများတွင် ပိုမို ဂရုစိုက်ရမည့် ပြသနာရပ်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများအပြား တွင်တွေကြုံနေကြရသည်ကို သတင်းမီဒီယာများမှတဆင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။
အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်လိုက်သောအခါ အိမ်နီးချင်း အာရပ်နိုင်ငံများသို့ ပါလက်စတိုင်း ဒုက္ခသည်များ အလုံးအရင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်ကြသည်ကို တွေ့မြင်ရသလို အီရတ်နိုင်ငံ တွင် စစ်မက်ဖြစ်ပွားသောအခါ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြသော အီရန်၊ တူရကီ၊ ဆီးရီးယား၊ ဂျော်ဒန် နှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား နိုင်ငံများအတွင်းသို့ အီရတ်နိုင်ငံသားများ အလုံးအရင်းနှင့်
၀င်ရောက်ခိုလှုံ နေထိုင်ကြသည်ကို သိရှိကြရပါသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် စစ်မက်ဖြစ်ပွားသောအခါ ၄င်း၏အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြု
သော ပါကစ္စတန်၊ အီရန်နှင့်ဗဟိုအာရှနှိုင်ငံများသို့ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားများအများအပြား
စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေသည့် အခြေအနေမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခကြောင့် နိုင်ငံတစ် နိုင်ငံမှ အခြားအိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများသို့ ကူးပြောင်း ခိုလှုံနေထိုင်ကြမှုများလည်း ရှိတတ်ပါသည်။ ဥပမာ-ဆီးရီးယားအစိုးရက ၄င်းတို့နှင့် သဘောထားကွဲလွဲသူများ၊ အတိုက်အခံနိုင်ငံ ရေးသမားများ၊ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူများ ကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ-စစ်တပ်များဖြင့်
အင်အားသုံးကာ ဖြိုခွဲ နှိမ်နင်းသောအခါ အိမ်နီးချင်း တူရကီနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဆီးရီးယား နိုင်ငံ သားဒုက္ခသည်များ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ၀င်ရောက်နေထိုင်ကြသည့် အဖြစ်လည်းရှိနေပါ သည်။
ရာသီဥတုဘေးဒဏ်ကြောင့်၎င်း၊ အစာရေစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကြောင့်၎င်းမိမိတို့ နေရင်း နိုင်ငံကို စွန့်ခွာပြီး အခြားတစ်နိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံများသို့ ပြောင်းရွှေ့ ခိုလှုံနေကြသူများကို ဆူဒန်၊အီသီယိုပီးယား၊ဆိုမာလီ အစရှိသော နိုင်ငံများတွင် တွေ့မြင်နိုင် ပါသည်။
အထက်ပါ အခြေအနေများနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ မိမိတိုင်းပြည်တွင် နေထိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက်ရသည့် အခြေအနေကို အားရကျေနပ်မှု မရှိသူများက အခွင့်အလမ်းသာလိမ့်နိုး၊
အခြေအနေကောင်းလိမ့်နိုးဖြင့် အခြားတစ်နိုင်ငံသုိ့ တရားဝင်သောနည်းလမ်းများနှင့်ရော
တရားမ၀င်သော နည်းလမ်းများနှင့်ပါ ရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံနေထိုင်မှုများ၊ခိုးဝင်မှုများမှာ နေ့စဉ်ထုတ်
သတင်း မီဒီယာများတွင် အမြဲပါရှိ ဖတ်ရှု့ နေရသော ကိစ္စများ ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကနိုင်ငံများမှ ပြည်သူအများက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အတွင်းသို့ တရားမ၀င် ၀င်
ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ကျိုးပမ်းနေမှုများ၊ ယခင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ အုပ်စုဝင် အရှေ့ဥရောပ နိုင်ငံများမှ ပြည်သူများက အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများ အတွင်း ခိုးဝင်နိုင်ရန် ကျိုးပမ်းအားထုတ်
မှုများ၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အာရှနိုင်ငံများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များက သူတို့နိုင်ငံထက် အခြေအနေကောင်းသော မလေးရှားနိုင်ငံသို့၎င်း-သြစတေးလျနိုင်ငံသို့၎င်းတရားမ၀င်ဝင်ရောက်နေထိုင်နိုင်ရန်၊လုပ်ကိုင် စားသောက်နိုင်ရန်ကျိုးပမ်းအားထုတ်မှုများမှာ မကြားချင်မှအဆုံး၊မမြင်ချင်မှအဆုံးနေ့စဉ်ထုတ်
သတင်းမီဒီယာများတွင် ဖတ်ရှုနေရသော အကြောင်းအရာများဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်စယန်သာသနာကို ကိုးကွယ်သော အာဖရိကန် တစ်ယောက်သည် ဥရောပနိုင်ငံ
နိုင်ငံတစ်ခုခုသို့ ရောက်ရှိသွားပါက ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ တူယုံမျှဖြင့် ဥရောပနိုင်ငံသားတစ်
ယောက်ဖြစ်မသွားနိုင်ပါ။ တရားဝင် ၀င်ရောက်လာသူဖြစ်ပါက တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်
ကိုင်ဆောင်သူ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါမည်။ ခိုးဝင်လာသူဖြစ်ပါက တရားမ၀င်နေထိုင် သူသာ ဖြစ်သွားပါမည်။ နိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိနေသူ မှန်သမျှကို မည်သည့်နိုင်ငံကမှ သူတို့
နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု လက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသား သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ပါလက်စတိုင်းအာရဗ်များသည် ၄င်းတို့ရောက်ရှိရာ အာရဗ်နိုင်ငံ
တိုင်းတွင် နိုင်ငံခြားသားများအဖြစ် နေထိုင်နေကြရသည်မှာ အများအသိပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ လူမျိုးတူ ဘာသာတူများခြင်း အိမ်နီးနားခြင်းနိုင်ငံဖြစ်နေသောအခါ နှစ်နိုင်ငံ
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ဆက်ဆံခြင်းများပြုလုပ်ရာမှအစ မိမိနိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးကို
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးအဖွဲ့များသည် အထူးဂရုပြု စောင့်ကြည့်စီစစ်ရမည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်ပေသည်။
အထားအရ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေအများဆုံး နိုင်ငံကြီး နှစ်နိုင်ငံ၏အကြားတွင် တည်ရှိနေသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် အထူးသတိ ၀ီရိယအမြဲထား နိုးကြားနေရ
ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံနှစ်ခု ဖြစ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ အပြင်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည်မှာလည်း အထူးဂရုပြုရမည့် အချက် တစ်ချက်ဖြစ်ပေသည်။
အိန္ဒိယ၊ တရုတ် နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတို့သည် လူဦးရေ အလွန်များပြားပြီး လူဦးရေ
တိုးပွားနှုန်းလည်းမြင့်မားလွန်းသော နိုင်ငံများဖြစ်ကြပါသည်။အထူးသဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ
သည်ပိုင်နက်နယ်မြေကျဉ်းမြောင်းပြီးလူဦးရေထူထပ်လွန်းခြင်း၊ သဘာဝဘေး ရာသီဥတု ဘေး
အန္တရာယ်များကို အမြဲမပြတ်ခံစား နေရခြင်းများကြောင့် နိုင်ငံကို စွန့်ခွာလိုသူ အရေအတွက် အစဉ်အမြဲ မြင့်မားနေတတ်သည်ဟု ယူဆရပါသည်။
ရှေးအစဉ်အဆက်ကာလများကပင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်(ယခင်အရှေ့ ပါကစ္စတန်)နိုင်ငံမှဘင်္ဂါလီလူမျိုးများစိမ့်ဝင်မှု၊ ခိုးဝင်မှု၊ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်ကြမှု၊ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန်ကျိုးပမ်းအားထုတ်မှုများစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်နေရပါသည် လက်ရှိလည်း တရားမ၀င်နည်းလမ်းများဖြင့် ခိုးဝင်ရန် ကျိုးပမ်အားထုတ်မှုများ ပြုနေသည်ကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဖမ်းဆီး အရေးယူနေရသည်များရှိနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာမည့် နယ်မြေဒေသအတွင်းသို့ ကမ္ဘာ့နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ဒေသများ
မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဝင်ရောက်လာမှုမှာ ခရစ်သက္ကရာဇ် (၉)ရာစုနှစ်လောက်က အစပြု
ခဲ့ကြောင်း၊ မွန်ဘုရင်၊ ရခိုင်ဘုရင်၊သထုံဘုရင်များလက်ထက်-နောက်ပုဂံမင်းဆက်များလက် ထက် ကပင် ကုန်သည်များ၊ စစ်မှုထမ်းများ၊ သုံ့ပံ့များ အဖြစ်ရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း သမိုင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရှိနိုင်သော ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာဘုရင်များက နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး အခန်းကဏ္ဍမျိုးစုံတို့တွင် တာဝန်ချ ထားအသုံးပြုရန်အတွက် ဘင်္ဂလား၊ အာသံ၊ မဏိပူရ အစရှိသောနယ်များမှ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်၊
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ပုဏားလူမျိုး အများအပြားကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာပြီး အရည်
အချင်းအလိုက် အချို့ကို နန်းတွင်းအပါးတော်တွင် တာဝန်ပေး အသုံးချခဲ့သလို အချို့ကိုစစ်မှု
ထမ်းစေခြင်း၊ အချို့ကို တိုင်ပြည်အနှံ သီးစား လုပ်စား မြေနေရာများချထားပေးလျက် စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်စေခြင်းများလည်းရှိခဲ့ပါသည်။
ကိုလိုနီခေတ်တွင်လည်း အင်္ဂလိပ်တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်အတူ ကမ္ဘာ့အနယ်နယ်အရပ်ရပ် မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယတိုက်နယ်မှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၊ဟိန္ဒူ
ဘာသာဝင်များသည် အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်၊ ကာကွယ်ရေးတာဝန်၊ တည်ဆောက်ရေးတာဝန်၊ ပညာသင်ကြားရေးတာဝန် အစရှိသော တာဝန်မျိုးစုံထမ်းဆောင်ကြရင်း ၀န်ထမ်းဘ၀နှင့် မြန် မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူများလည်း အမြောက်အများရှိခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ မန္တလေးမြို့လယ်တွင်နေထိုင်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်၏ ဘိုးဘွား ဘီဘင် တို့သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၅၀-
ကျော်အချိန်ကာလ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဒုတိယစစ်ပွဲအပြီးအချိန်ကတည်းက မီးရထားလုပ်ငန်း
တာဝန်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြရာ မြင်ကွန်းမြင်းခုံတိုင်အရေးအခင်း
ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်တွင် မန္တလေးမြို့သို့ ရောက်ရှိ နေခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ဘခင်ဘက်မှဖြစ်သော ဆွေမျိုးသားချင်းများသည်၎င်း၊ မိခင်ဘက်မှတော်စပ်
နေထိုင်လျက်ရှိနေကြပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားဥပဒေအရနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကြိုက်နှစ် သက်သလိုမှတ်ကျောက်တင်အစစ်အဆေးခံနိုင်သည့် အနေအထားရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ သည်
မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက်၊ အခြားသူများကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် မြန်မာ
လူမျိုး မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်နေကြပါပြီ။အခြားရွေးချယ်စရာ မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာ့အစားအစာများကိုသာ စားလေ့ရှိပါသည်။မြန်မာစကားကိုသာ ပြောတတ်၊ရေးတတ်၊ဖတ်တတ်ကြပါသည်။မြန်မာရုပ်ရှင်၊မြန်မာသီချင်း၊မြန်မာဝတ္ထုများကိုသာ
အရ နေပုံထိုင်ပုံ အနည်းငယ် ကွဲပြားသော်လည်း မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်းသာ နေထိုင်ကြပါ
ကျွန်ုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသား မိဘနှစ်ပါးမှ ပေါက်ဖွားလာသော မြန်မာနိုင်ငံသားလက် မှတ်ကို တရားဝင် ရရှိကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်
နှင့် ကျွန်ုပ်၏မြန်မာနိုင်ငံသား ဇနီးမှ မွေးဖွားထားသော သားနှင့်သမီးတို့အတွက် နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးလက်မှတ်ကိုလျှောက်ထားဆဲဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်၏ မိသားစု ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဇယား
အရ၄င်း၊ဇနီးသည်၏မိသားစု ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဇယားအရ၄င်း တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးပြီး
သည့် အချိန်တွင် သားသမီးများ၏ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးလက်မှတ်များသည် ဥပဒေနှင့်အညီရရှိ
မည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါသည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီစစ် စစ်ဆေးမှုဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်က ၄င်းတို့အား
ပေးအပ်ထားသောတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူများက နား လည်သဘောပေါက် လက်ခံရမည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတွင်းသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက တည်းက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသူများ အများအပြားရောက်နေ ရှိနေ
၄င်းတို့သည်ဗုဒ္စ ဘာသာဝင်များဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဘုရားသွား ကျောင်း တက်လုပ်နိုင်ကြခြင်းကြောင့်သော်၎င်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ
ဗလီကျောင်းများတွင် အတူတစ်ကွ ဘုရားဝတ်ပြုနိုင်ကြခြင်းကြောင့်သော်၎င်း ကျွန်ုတို့နှင့်
တန်းတူညီမျှသော နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများကို ခံစားခွင့် ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၄င်းတို့၏အခြေအနေကို ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် သိကြရမည်ဖြစ်သလို ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း
မိမိတို့ အခြေအနေ မိမိတို့တန်ဘိုးကို သိရှိကြဘို့လိုအပ်ပါသည်။
၄င်းတို့အား စီစစ်ခြင်း၊ ၄င်းတို့အားထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ၄င်းတို့အားအရေးယူခြင်းများသည်
နိုင်ငံတကာကဆောင်ရွက်နေကြသည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း ဌာနဆိုင်
တို့ ပြည်သူအများက နားလည် သဘောပေါက်ကြရပါမည်။
သူများမှ နောက်မျိုးဆက်မွေးဖွားလာသူများကိုနိုင်ငံသားစီစစ်ရေး ကဒ်ပြားထုတ်မပေးနိုင်သေး
ခြင်း၊ ကြန့်ကြာနေခြင်းများမှာ ဘာသာရေးအရ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်း မဟုတ်
ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးက နားလည်သဘောပေါက်ကြရပါမည်။
တစ်ပါတီ အာဏာရှင်၏ ကြိုးနီစနစ်ကြောင့်၎င်း၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု တင်းကြပ်လွန်းသော
စစ်ကောင်စီ၏အုပ်ချုပ်မှုကြောင့်၎င်း နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးလက်မှတ်-ကဒ်ပြားရရှိရန် နှောင့်နှေးမှု
ကြန့်ကြာမှုများရှိခဲ့သည်မှာ အမှန်ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ လက်ထက်တွင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိလာခြင်း၊ဖြေလျော့မှုများပြုလုပ်ပေးလာခြင်းတို့ကြောင့် နှောင့်နှေးမှု၊ကြန့်ကြာ
မှု၊ ခက်ခဲမှုပြသနာများမှာ လျှင်မြန်စွာ ပြေလည်သွားတော့မည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်ပေသည်။
ယခင်အချိန်အခါများက ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအစ္စလာမ်ဖြစ်နေသူ-ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာခရစ်စယန်ဖြစ်နေသူများကို မဆိုထားနှင့်-ကျေးလက်တောရွာများတွင်နေထိုင်သူတော
သူတောင်သား ဗုဒ္ဒဘာသာကိုးကွယ်ကြသူများပင် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား ရရှိရေးအတွက်
များစွာခက်ခဲခဲ့ကြရပါသည်။ငွေကြေးများစွာ အကုန်အကျခံမှသာ စီစစ်ရေးကဒ်ရခဲ့ကြပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရေးသားတင်ပြနေရခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်အတွင်း အေးအတူ ပူအမျှ အတူနေ ထိုင်ကြသောနိုင်ငံသားအချင်းချင်းသော်၎င်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူထားသော အစိုးရအဖွဲ့၏ တာဝန်ဝတ္တရားဆောင်ရွက်မှု များအတွက်သော်၎င်း ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာကိုအကြောင်းပြုရ်ျ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှု၊ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ မဖြစ်ကြရေးအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ နိုင်ငံသားများဘက်မှလည်း မမှန်မကန်ဖြစ်နေသည့် ကိစ္စများကိုတွေ့မြင်သိရှိ ခဲ့ပါက ဌာနဆိုင်ရာများသို့အမှန်အတိုင်းတင်ပြကြရန် တာဝန်ရှိပါသည်။စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော မီဒီယာများကလည်း အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရေးသားကြရန် တာဝန်ရှိပါသည်။မိမိတို့ သိရှိ သော မသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား ရရှိအောင်ကျိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကို ဖော်ထုတ်ရပါမည်။ မသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် နိုင်ငံသား စီစစ်ရေးကဒ်ပြား လက်ဝယ်ကိုင် ဆောင်ထားမှု၊ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရရှိအောင်ကျိုးပမ်းအားထုတ်မှု တစ်ခုခုကို သိရှိပါလျှက် ထိမ်ချန် ထားသူသည် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရ အပစ်ရှိသူဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်(၁၉၈၅)ခုနှစ်ကတမူးမြို့သို့အလည်အပတ်သွားရင်းတစ်ဘက်နိုင်ငံမိုးရေး မြို့သို့နေချင်းပြန် အလည်အပတ်ရောက်ခဲ့ပါသည်။မိုးရေးမြို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ အပြီးပြန်သွားပြီးသူအတော်များများကိုတွေ့ခဲ့ရပါသည်။၄င်းတို့မှာ အိန္ဒိယတွင်မြန်မာနိုင်ငံထက် အခြေအနေကောင်းလိမ့်မည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အိန္ဒိယသို့ ပြန်သွားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး လက်တွေ့တွင် နေရေးထိုင်ရေး၊အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရေး၊လူမှုရေးမှအစ အခြေအနေ မကောင်းသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ အခွင့်အခါသင့်လျှင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ရေး မျှော် လင့်ချက်ဖြင့် မိုးရေးတွင် ခေတ္တခိုကပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကာယကံရှင်များကပြောပြသဖြင့် သိရှိခဲ့ရဘူးပါသည်။
သက္ကရာဇ်(၂၀၀၀)ပြည့်နှစ်လောက်ကမန္တလေးမြို့တွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး မိသားစုတစ်စု ကိုတွေ့ခဲ့ဘူးပါသည်။၄င်းမိသားစု၏အကြီးအကဲများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဇာတိများဖြစ်ကြ ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ခိုးဝင်လာသူများဖြစ်ကြပါသည်။နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားမရှိ၊ပုံစံ (၁၀)မရှိကြပါ။မြန်မာစကားလုံးဝမတတ်ကြပါ။သူတို့၏သားသမီးအချို့မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အချို့ကို မြန်မာနိုင်ငံထဲရောက်မှမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။သူတို့ကတော့ မြန်မာစကားကို ကောင်းစွာတတ်ကျွမ်းကြပါသည်။မြန်မာစာကိုလည်းရေးတတ်ဖတ်တတ်ကြပါသည်။ခိုးဝင်လာ သူ၏မြေးများကတော့အစိုးရကျောင်းများသို့တက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေကြပါပြီ။မည်သည့် လမ်းကြောင်းမှ မည်သည့်ပုံစံဖြင့် မည်သည့်အထောက်အထားမှမရှိဘဲ မန္တလေးမြို့သို့ရောက်ရှိ လာခဲ့ကြောင်းမသိရပါ။မန္တလေးမြို့သစ် အစွန်အဖျားတွင်မည်သို့တိုင်ကြားသည် မသိဘဲ ဧည့် စာရင်းနှင့်နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။(၂၀၀၂)ခုနှစ်လောက်တွင် ရန်ကုန်သို့ပြောင်းမည်ဆိုပြီး ပျောက်သွားကြပါသည်။ယခု ဘယ်ရောက်နေကြမှန်းမသိပါ။သူတို့ကဲ့သိုသော မိသားစုများ အရေအတွက်မည်မျှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရောက်ရှိနေကြပြီလည်းကျွန်ုပ် မခန့်မှန်းတတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်(၂၀၀၂)ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းက မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့စဉ်က သူတို့ကိုယ်သူတို့ မြန်မာနိုင်ငံကလာပါသည်ဟုပြောသောဘင်္ဂါလီလူမျိုးမြောက်များစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ထိုလူ များထဲတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများလည်းအများအပြားပါရှိကြောင်းကို သူတို့ဘင်္ဂါလီချင်း ပြောပြမှုကြောင့် သိရှိခဲ့ရပါသည်။မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အနေချောင်ရေး၊UNHCR မှထုတ်ပေး သောဒုက္ခသည်ကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရရေးအတွက် လိမ်ညာပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ထား သူအများအပြားကိုတွေ့ခဲ့ရဘူးပါသည်။
ကွာလာလမ်ပူတွင် ဘင်္ဂါလီလူငယ်တစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူ့အသက်မှာ (၁၉)နှစ်ခန့်ရှိပြီး-မကြာမှီကမှမလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသူဖြစ်သဖြင့်ရိုးရိုး သားသားစကားပြောလို့ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သူ၏ဇာတိမှာ ဘူးသီးတောင်မှ ဖြစ်ပါသည်။သူ၏မိခင်မှာ ဘူးသီးတောင်အရပ်သူ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြစ်ပြီးဖခင်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းခိုးဝင်လာခဲ့သူဘင်္ဂလီ လူမျိုးဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။သူ့ကို မွေးဖွားပြီးသည့်နောက်သူ့ဘခင်မှာ သူ့ဇာတိနိုင်ငံသား များ၏ထုံစံအတိုင်း သားမယားပြစ်ပြီး အိမ်မှထွက်သွားသဖြင့် သားအမိနှစ်ယောက် ဆင်းဆင်း ရဲရဲနှင့်ဖြစ်သလို လုပ်ကိုင်စားသောက် အသက်မွေးခဲ့ရကြောင်းပြောပြပါသည်။ပြီးခဲ့သည့် နှစ် ကမှ သူ၏ဖခင် မလေရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင်ရှိနေကြောင်း သတင်းကြားရသဖြင့် ဖခင် ရှိရာသို့လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။
သူနေထိုင်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်သားများမှာ ပြည်မ(သို့မဟုတ်)ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာရန် မဆိုထားနှင့် တစ်ရွာမှတစ်ရွာ ကူးသန်းသွားလာရန်တောင်မလွယ်ကူကြောင်း၊ထို့ကြောင့် ဘူး သီးတောင်မှ ငါးဖမ်းလှေဖြင့်ပင်လယ်တွင်းသို့လိုက်သွားပြီး တောင်ဘက်ပိုင်းကျသောရွာမှ ငါး ဖမ်းလှေနှင့် ပင်လယ်ပြင်မှာတွေ့-လှေပြောင်းစီး၊တောင်ဘက်ပိုင်းကျသောရွာသို့ရောက်-နှစ် ရက်-သုံးရက်နား၊နောက်ထပ်ငါးဖမ်းလှေထပ်စီး-ပင်လယ်ပြင်မှာ ပိုပြီးတောင်ပိုင်းကျတဲ့ရွာက လှေနဲ့တွေ့-လှေပြောင်းစီး-ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းလှေပြောင်းစီးလိုက်-တောင်ပိုင်းကရွာတွေ ရောက်လိုက်နဲ့-အချိန်တစ်လခန့်အကြာမှာ ပုသိမ်မြို့ကိုရောက်လာခဲ့ကြောင်း၊ပုသိမ်မှ ရန်ကုန် သို့ ကုန်းလမ်းခရီးမှ ခြေလျင်လျှောက်လာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရောက်သောအခါတွင်တော့ သူ့ဘ ခင်ဘက်မှ တော်စပ်သော ဆွေမျိုးများက ဆီးကြိုကြပြီး လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းအတုများ ပြုလုပ်ပေးပြီး အောက်လမ်းမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပို့ပေးကြကြောင်း၊ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် မလေးရှား နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး၊လက်ရှိမလေးရှားနိုင်ငံတွင် တရားမ၀င်နေထိုင်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ သူနှင့်အိမ်ထောင်ကျပြီး ထမင်းဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူ ဖခင်နှင့်အတူနေထိုင်လျက်ရှိနေကြောင်း အဆိုပါလူငယ်က ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ဒီလူငယ်လေးလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံထဲကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နေထိုင်နေတဲ့သူ ဘယ် နှစ်ယောက်လောက်များရှိနေပြီလည်း ကျွန်တော်တော့ မစဉ်းစားတတ်ပါ။
(၁၉၉၈)နဲ့(၂၀၀၃)ခုနှစ်တွေမှာ ကျွန်ုပ် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံကို ဘုရားဖူးရောက် ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံ ဂျစ်ဒါမြို့၊မက္ကာမြို့ နဲ့ မဒီနာမြို့တွေကိုရောက်ခဲ့စဉ်က ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင် စားသောက် နေထိုင်နေကြသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအများအပြားတွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အမှန်တကယ် စွန့်ခွာလာကြသော ဘင်္ဂါလီနှင့်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး အနဲငယ် ကိုသာ တွေ့ခဲ့ရပြီး အများစုမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှဖြစ်ကြပါသည်။၄င်းတို့သည် ဆော်ဒီနိုင်ငံ တွင်ဒုက္ခသည်အဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ၄င်းတို့လာခဲ့ရင်းနိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံဟု လိမ်ညာ တင်ပြထားသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားများ ဆော်ဒီနိုင်ငံတွင်ဒုက္ခ သည်အဖြစ်နေထိုင်ခွင့်၊ခံယူခွင့်မပေးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အမည်ခံ-သူတို့အချင်းချင်း အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ထောက်ခံထွက်ဆိုကြပြီး ဒုက္ခသည်လက်မှတ်ကိုရယူထားကြပြီး လုပ်စား နေကြသူများဖြစ်ပါသည်။၄င်းတို့သည် မြန်မာစကားလုံးဝမတတ်ကြပါ။မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို လုံးဝနားမလည်ကြပါ၊မြန်မာလူမျိုးများကို အထင်သေးကြပါသည်။မြန်မာလူမျိုးများကိုတွေ့ထိ ဆက်ဆံရလျှင်နှိမ်ချဆက်ဆံတတ်ပါသည်။သူတို့နေထိုင်ခွင့်ရရှိအောင် အသုံးချထားသော နိုင် ငံအမည်ကိုပင် ထောက်ထားမှုမရှိကြပါ။ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတူခြင်းဖြစ်သည်ကိုလည်း သူ တို့ ဂရုမစိုက်ကြပါ။
အဆိုပါလူများကဲ့သို့ တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာသူများက မန္တလေး၊ ရန်ကုန် အစရှိသော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပိုင်း မြို့များတွင် အခြေချနေထိုင်ပြီးသည့်နောက် သားသမီးများမွေဖွား လာ ခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးဦးနှင့်အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီးများမွေးဖွားလာသည်ဆိုပါစို့-အဆိုပါ ကလေးများအတွက် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားကို မည်သည့်ပုံစံနှင့် လျှောက်ထားကြ မည်နည်း။အလွယ်တကူပင်-မပြည့်စုံသည့်အပိုင်းကတစ်ပိုင်း-လိမ်လည်ရေးသွင်းထားသည့် အ ပိုင်းကတစ်ပိုင်း-ပုံစံဖြည့်ရ်ျသွားရောက်လျှောက်ထားကြပေမည်။ထိုအခါ-၄င်းတို့လျှောက်လွှာ၏ မသေချာ မရေရာမှုကြောင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ စစ်ဆေး စီစစ်ရ သည့်အချိန်ကြာပါတော့မည်။နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားထုတ်မပေးနိုင်သည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ရပါတော့မည်။မည်သူ့ကို အပြစ်ပြောကြမည်နည်း။သေချာပါသည်-လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦး စီဌာန ၀န်ထမ်းများ သည်သာ အပြစ်တင်ခံရမည့်သူများဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် သေချာစွာ သိရှိသည်များကို မှန်မှန် ကန်ကန်တင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြားတစ်ဖက်ဖြစ်သော အရှေ့မြောက်ပိုင်း နယ်စပ်မှ စိနတိုင်း သားများ၏နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် တရားမ၀င်ဝင်ရောက်ခြင်းများ အများအပြား ရှိနေမည်မှာလည်း အသေအခြာပင်ဖြစ်ပါသည်။မန္တလေးမြို့ကြီးပေါ်တွင်ပင် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေး ကဒ်ပြား ကိုင်ဆောင်ထားပြီး မြန်မာစာ-မြန်မာစကား မတတ်သူတွေ မကြာခဏ တွေ့နေရပါ သည်။(၁၉၉၃)ခုနှစ်ကပင် မန္တလေး-မိုးကုတ် ကားလမ်းဘေးရှိ လိပ်ကျရွှေတွင်းစခန်းတွင် မြန် မာစကားမတတ်သော၊မြန်မာငွေကိုမမြင်ဘူးသော-မသုံးတတ်သော-မန္တလေးကို “၀ချဲ့န်” ဟု ခေါ်တတ်သော၊ အသားဖြူဖြူ၊မျက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းနှင့် အရွယ်ကောင်းလူငယ်လေးများကို တွေ့ခဲ့ဘူးပါသည်။သူတိုကတော့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဗုဓ္ဒဘာသာဟု ဆိုတတ်ပြောတတ်သဖြင့် မြန်မာဗုဓ္ဒဘာသာဝင်များနှင့် ရောလွယ်ရှက်လွယ်ရှိကြပါလိမ့်မည်။အခြား ဘာသာဝင်မဟုတ် သူများ ကတော့ တသီးတခြား ထင်ထင်ရှားရှား ရှိနေကြပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒအရဆိုလျှင်တော့ စီစစ်မှတ်ကျောက်အတင်ခံရပြီးမှ ရရှိလာသော နိုင်ငံ သားစီစစ်ရေးကဒ်ကို တန်ဘိုးထားကြရမည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။လွယ်လင့်တကူ ဘုန်းဘော လအောထုတ်ပေးခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ ဆိုလိုရင်းမှာ မလိုအပ်ဘဲ ကြန့်ကြာခြင်း၊ထစ်ထားခြင်း၊ရစ်နေခြင်း၊ပညာပြ ခြင်း၊ထုတ်မပေးဘဲထားခြင်း များကိုဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။
အချို့သောသူများတွင် ဆင်းရဲချို့တဲ့မှု၊အသိပညာ ကင်းမဲ့မှု၊မိသားစု ဆွေမျိုးသားချင်း များအဆင်မပြေမှု၊အဆက်အသွယ်ပြတ်နေမှု၊သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရမှု အစရှိ သောအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာစာရွက်စာတမ်းတင်ပြနိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ မပြည့်စုံခြင်းများ သည်လည်း အစဉ်အမြဲကြုံတွေ့ကြရမည့် ပြသနာများဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောသူများအတွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအနေနှင့်သဘောထားကြီး စွာဖြင့်နားလည်မှုရှိပေးပြီးလျှောက်ထားသူ၏၀မ်းကွဲဆွေမျိုးများ၊အကြီးအကဲများ၊ရပ်မိရပ်ဖများ ကို စုံစမ်းမေးမြန်းရ်ျ ဖြေလျှော့မှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့် အခြေအနေရှိပါသည်။သို့ဖြစ်သည့်အ တွက်နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား အမှန်တကယ်ရရှိထိုက်သူ၊မှန်မှန်ကန်ကန်လျှောက်ထားသူ များအတွက် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြားရရှိနိုင်ရေးသည် များစွာခက်ခဲလှသည့် ပြသနာတစ် ရပ် မဟုတ်တော့ပါဟု ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ယူဆပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် သီးခြား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပေသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအပေါ် ကျရောက်လာ နိုင်သော မည်ကဲ့သို့သော အဖျက်အမှောင့် ပယောဂ ဘေးရန်များကိုမဆို မိမိအသိစိတ်နှင့်မိမိ ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြရန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ လွှဲရှောင်ရ်ျ မရသောတာဝန် ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဘိုးအဘွားများသည် ဟိုးယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာ မြန်မာဘုရင်များအုပ် ချုပ်ခဲ့စဉ်ကတည်းကအစပြုရ်ျ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးစစ်ပွဲများအလယ်-ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ် အပါအ၀င် မဆလခေတ်ပါမကျန် နိုင်ငံတော်တာဝန်များကို မြန်မာပြည်သားစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ထမ်းဆောင်တာဝန်ယူခဲ့ကြသည်မှာအထင်အရှားဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကာ ကွယ်ရေး၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊တရားစီရင်ရေး၊ဥပဒေပြုရေး၊သံတမန်ရေး၊တည်ဆောက်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ပညာရေးနှင့်အနုပညာရေးတွင်ပါမကျန် နေရာကဏ္ဍစုံလင်စွာဖြင့် ထူးချွန်ပြောင် မြောက်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်မှာ မည်သူမှငြင်းပယ်ရ်ျမရအောင်သမိုင်း အထောက် အထားစုံလင်စွာဖြင့်ရှိနေပါသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရသည်မှာ ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်စစ်များအဖြစ် မိမိမျိုးနွယ်ဆက်များကို ထိမ်းသိမ်းစေလိုပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်သူ များနှင့် မိမိ၏မျိုးဆက်များ သွေးနှောခြင်းများကိုဆင်ခြင်သင့်ပါသည်။တရားမ၀င် ၀င်ရောက် လာသူများ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား မရရှိခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မဟုတ်ပါ။၄င်းတို့ ၏အခြေအနေနှင့်၎င်းတို့နေကြပါစေ။ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသားစစ်စစ်များလည်း မိမိအဆင့်အတန်း နှင့်မိမိနေထိုင်ကြစေလိုပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံသား အင် အားများကို အစွမ်းကုန်အသုံးပြုရ်ျတည်ဆောက်ကြရတော့မည့် အချိန်အခါသို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးတည်ဆောက်ရေးအတွက် ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင်မြန်မာနိုင်ငံသားများ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရတော့မည့် အချိန်အခါသို့ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားများသည် သက်ဆိုင်ရာတွင် တရားဝင်လျှောက်ထားရ်ျ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့် ရနိုင်ပါသည်။သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်း ပြည့်မှီပါက ဧည့်နိုင်ငံသား အ ဖြစ် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံသားပြုပေးရန်အတွက်လည်း လျှောက်ထားခွင့်ရှိပါ သည်။ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ မှန်မှန် ကန်ကန်နေထိုင်သူများအတွက် မည်သည့်ပြသနာမှ မရှိ နိုင်ပါ။
အချို့အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိအခြေအနေ၊မိမိအခွင့်အရေး၊မိမိ၏တန်ဘိုး ကို မသိကြပဲ၊အလေးမထားကြပဲ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် သွေးနှောခဲ့ကြပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူမှစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း၊စီစစ်ခြင်းခံရသောအခါ မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ကတာဝန်ရှိသူများအပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားစေရန်အတွက် ဘာသာရေးပြသနာ လုပ်တတ် ကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတော်ကြီးကို ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီး အဖြစ် ပီပီပြင်ပြင် ပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် ကြီးမားလှသောတာဝန်များ နိုင်ငံသားတိုင်း ကိုယ်စီရှိနေပါသည်။တိုင်းပြည်အတွက် အမိမြန်မာပြည်အတွက် လွန်စွာအရေးကြီးသည့် အ ချိန်အခါဖြစ်နေပါသည်။ပြသနာမဟုတ်သော ကိစ္စကို ပြသနာဟု မမြင်ကြပါနှင့်၊ပြသနာ မလုပ် ကြပါနှင့်ဟု သတိပေး တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
This entry was posted on June 23, 2012 at 11:35 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.